Nhengo dzeZanu PF dzakamirira kuvhota
Kunyange hazvo kuziviswa kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzakaitwa sarudzo neSvondo kwanonoka, vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura neMuvhuro vaswera votopemberera vachimiririra kuti vazoshevedzerwa zviri pamutemo.
Mudhorobha reMasvingo mamwe mawadhi akakwanisa kuita sarudzo akaita seku Wadhi Four, kwasera kune mhururu nemirirdzo vatsigiri vachipemberera kukunda kwaVaTavara Mudekunye, asi kune vaikwikwidza kupinda muparamende havasati vaziva sezvo mamwe maWard azotanga kuvhoteswa nhasi uye achipedza na 6 manheru.
VaMudekunye vati kunyangwe hazvo vakamirira kuzoudzwa zviri pamutemo, zviverengwa zvepaivhoterwa mu Ward mavo zvanamirwa panze zvaratidza kuti vakunda uye vari kufara nazvo.
“Takwanisa kuwana mavhoti anosvika 431, anotevera 42, 21 ne 22 ne 12 asi tangatichiita zvemumusha wedu. Tave kuchibatana vanhu vose vandanga ndichi contesta navo toita development yedu takabata.”
Asi kune dzimwe nzvimbo mvongamupopoto nekunetsana kwaenderera mberi, vanokwikwidzana vachipomerana mhosva dzekubira musarudzo kubudikidza nekubviswa kwevatsigiri vavo mubhuku rekuvhota.
KuChiredzi South vanokwikwidza vatatu pachigaro cheparamende nemakanzura gumi nemasere vakabuda musarudzo nezuro vakasiya munhu mumwe chete achizvikwikwidza.
VaDarlington Chiwa, VaFrancis Moyo naVaNorman Sharara vakabuda musarudzo vakanyorera hutungamiri hwesarudzo uye mutungamiriri webato ravo VaEmmerson Mnangagwa gwaro renyunyuto vachiti sarudzo idzi dzitangwe.
VaMoyo naVaChiwa vanoti VaFarai Musikavanhu vavaida kukwikwidzana navo vakabvisa mazita evatsigiri vavo mugwaro rekuvhotesa izvo zvaita kuti vabude musarudzo idzi.
“Ini ndaita pull out ndekuti vanhu vangu vanga vachindisupporta vose vakabviswa mu voter’s roll uye vakaita verification yakaitwa ne mamaneja emunhu hwani arikukukwidza. Sarudzo dzaenderera mberi nemunhu hwani, asi taita petition yedu kuti first secretary vedu vaED Mnangwagwa vatore matanho kana vaita decision ndiyo yatinotevedzera.”
VaChiwa vanoti vabuda mumakwikwi aya nekuti chero ivo zita ravo rakabviswa mugwaro rekuvhotesa zvekuti vakange vasingakwanisi kuzvivhotera.
“Ma voter’s roll acho ose akakombailiwa ne one candidate paitwa verification. Vaito edhita vachibvisa mazita evatsigiri vedu including isusu ma candidates, saka unoenda kundovhota kune mazita emunhu hwani?”
Mapurisa azoshevedzwa kudzinga vatsigiri vevatatu ava nemakanzura gumi nemasere varatidzira mudhorobha reChiredzi vachida kuti sarudzo idzi dzimiswe nekuti VaMusikavanhu vange vomhanya mujaho uyu voga.
Kune dzimwe nzvimbo seku Zaka Central neEast vatsigiri veZanu PF varatidzirawo mushure mekushaikwa kwemazita evavaitsigira mukukwikwidza kwezvigaro zvemakanzuru.
KuGutu East sarudzo dzazoendenderera mberi mushure mekunge dzakanonoka kutanga neSvondo uye vanokwikwidzana, Amai Berita Chikwama naVaMafios Mlambo, vakambotana pahuro vachipokana panyaya dzevanovhota.
Pakaita mhirizhonga paBhasera mushure mekunge mumwe aikwikwidza hukanzura kuWard 17 muGutu East, VaNhamo Tagarirofa, varohwa naVaKennedy Jongwe vachipomerwa mhosva yekukwikwidzana nababamunini vavo, VaMartin Jongwe.
VaTagarirofa vakamhan’gara nyaya iyi paBhasera Police Station vakazoendeswa kuGutu Mission Hospital kunorapwa.
Zvichakadaro vatungamiriri vesarudzo dzeZanu PF muMasvingo vati vachadaidzira zvabuda musarudzo kubva mutunhu ose neMuvhuro manheru vachiita zvishoma nezvishoma.